Xildhibaanada Barlamaanka Somaaliya oo si kulul uga hadlay dilaal kadhacay Muqdisho (Sawiro) – Radio Daljir
Seteembar 22, 2018 1:47 g 0
Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta Magaalada Muqdisho ku yeeshay kulanka 5-aad ee Kalfadhiga 4-aad ee Baarlamaanka.
Kulanka waxaa Shir guddoominayay guddoomiyaha Golaha Shacabka Mudane Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan,waxaana goobjoog ka ahaa guddoomiye ku xigeenka koowaad Mudane C/weli Sheekh Ibraahim (Muudeey).
ku dhawaad 144 Xildhibaan ayaa kulanka soo xaadiray, waxaana xildhibaanada loo qeybiyay warbixin ku saabsaneyd dib u eegista xeer hoosaadka Golaha Shacabka.
Dhinaca kale Xildhibaan Faarax Cabdi Xasan oo ah Xoghayaha guddiga xeer hoosaadka, anshaxa, Xasaanada iyo daryeelka xildhibaanada ayaa Xildhibaanada u aqriyay warbixinta dib u eegista xeer hoosaadka golaha iyo meelaha guddiga ay dib u eegista ku sameeyeen.
Maxkamadda Ciidamadda Qalabka Sida oo Xukuno riday